Ichibi leBalsam lihlaziywe ngokupheleleyo i-4BR 2BA cottage yangoku
IDOCK LISUSWA EKUPHELENI KA-OKTOBHA.
IBHOKWE NGOKUPHELELEYO JULY & AUGUST 2022. Enkosi!
Wamkelekile kwindawo kaBud eBalsam Lake, ilitye lexabiso laseKawarthas.
Ihlaziywe ngaphakathi nangaphandle, kunye ne-125 yeenyawo ze-waterfront ekhuselekileyo. Ukufikelela ngokulula, ezantsi kwesanti eqinileyo kwaye akukho khula.
Indawo kaBud ixhotyiswe ngabo bonke ubunewunewu bendawo yokuhlala etofotofo: uqhagamshelo oluluqilima lweWiFi, umoya opholileyo, ikhitshi eligcweleyo kunye nokunye!
Ukuchaza kwakhona ukusebenza kude, indawo kaBud ibonelela ngowona msebenzi usuka ekhaya.
Yonwabela iphenyane, isikhephe esibheqayo kunye neekayak emanzini okanye jonga izinto ezibonwayo kunye nezandi ezisuka kwidokhi entle ecocekileyo nephangaleleyo. Ukunyuswa kwephenyane kuyafumaneka ukuze kusetyenziswe (ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo) ethatha ukuya kuthi ga kwi-1500lbs.
Ilawn enkulu ethe tyaba ivumela indawo eninzi kuyo yonke imidlalo yomhlaba. Ngokuhlwa, yabelana ngezihlandlo zosapho zihleli kwindawo yomlilo. Ukusuka kwidekhi okanye kwidokhi unokubukela inyanga ibonakalisa echibini.
Xa ilixesha lokuba ngaphakathi, uya kuluthanda uphuculo olutsha lwangaphakathi olubandakanya ikhitshi entle enamagumbi anezixhobo zentsimbi, iiTV ezinkulu ezi-2 zesikrini esicaba ezinesathelayithi kunye neesidlali zeDVD. Sinoqhagamshelo oluluqilima lwe-WiFi, olulungele iifowuni zevidiyo zomsebenzi, iikhosi ze-intanethi kunye nokusasaza ividiyo kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye.
Relax kwisofa enkulu ekhululekile okanye uhlale kwizitulo zokuphumla ezibonelela ngombono wechibi oya kuwukhumbula ngonaphakade. Ukuzigcina uxakekile, igumbi lemidlalo elisezantsi likunika iping pong kunye nefoosball. Iwasha kunye nesomisi zikwabekwe phantsi.
Uphuculo lwangaphandle lubandakanya idokhi entsha, unxweme lwesanti, umgangatho opeyintiweyo ohlaziyiweyo, indawo yokuhlala yepatio kunye nefenitshala yokutyela, iWeber BBQ, izitulo zelawn / indawo yokuphumla edokhi kunye nomgangatho womlilo ophuculweyo.
Indawo kaBud ilinde ukuba ibe likhaya lakho kude nekhaya.
I-Fenelon Falls kunye ne-Lindsay zombini ziyi-20min yokuqhuba kuzo naziphi na iimfuno zakho edolophini (i-Sobey's, i-Loblaws, iZiseko zoKutya, i-LCBO, iVenkile yeBeer, i-ayisikrimu kunye neevenkile zekofu, iindawo zokutyela ezininzi zosapho kunye nekhonkco, i-Canadian Tire, i-ofisi yeposi) . Unokukhwela isikhephe ukuya eFenelon Falls (yokupaka kwindawo yokutshixa iFenelon) ngeCameron Lake.
Hoping to bring the joys of the cottage to you and your family. It's our pleasure to host your getaway and bring you a little slice of heaven on Balsam Lake. Family-owned-and-operated, Bud's Place caters to your family's every need.
Siya kufumaneka ngefowuni / i-imeyile ukuba ufuna nantoni na ukuphucula ukuhlala kwakho. Ukuba ufuna umntu ngokobuqu, singafumaneka kwakhona njengoko sihlala kufutshane.